7 Izindawo ezingabizi kakhulu zokuhamba eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Izindawo ezingabizi kakhulu zokuhamba eYurophu
Eminye yemibono emihle kakhulu eYurophu ayigugu futhi kulula ukuyifinyelela. Noma kunjalo, uhambo oluya eYurophu lungabiza impela uma ungahleleli kusengaphambili. Ngenkathi izinhloko-dolobha eziningi zaseYurophu zizokwelula isabelomali sakho sokuhamba, kunezindawo ezimbalwa zokuhamba eYurophu ezingabizi kakhulu. Okuphezulu kwethu 7 izindawo ezingabizi kakhulu ukuhambela eYurophu zilungele isabelomali ngokuphelele futhi ngeke zeqe ama- € 50 ngosuku umuntu ngamunye.
Lawa magugu afihliwe awaweli emuva ebuhleni nasemlingo, kunamadolobha afana neParis neBerlin.
1. Izindawo ezingabizi kakhulu eYurophu: Cologne, Germany
Ngenkathi iGerman ibiza impela, ICologne ingenye yezindawo ezingabizi kakhulu ukuvakashela eYurophu. Kusuka endaweni yokuhlala enobungani besabelomali kuya kwezimpawu zomfanekiso zamahhala nokuhamba okungabizi, ICologne nakanjani iyi- ikhefu elikhulu lomuzi inketho uma uhamba wedwa noma uhlela uhambo lomndeni lwe-Euro.
Leli dolobha laseJalimane likhaya likabhiya waseKolsch, ngakho unganambitha izibiliboco zaseJalimane ngo- € 1.30 kuphela. Akukho lutho olumnandi njengokujabulela upende osebeni loMfula iRhein omuhle, ngemuva kosuku edolobheni. Qiniseka ukuthi udabula iFicshmarkt ngezithombe ezinjengekhadi leposi nezindlu ezimibalabala bese uqhubekela e-Old Town, Altstadt.
Ngaphezu kwalokho, le ingqophamlando edume kakhulu eJalimane, isonto elihle kakhulu laseCologne likhululekile ukuvakashelwa. Ukwakhiwa kwayo kwe-Gothic, kupendwe amawindi engilazi, futhi ukubukwa komfula kudumile. Uma uthanda ubuciko, ke Cologne has iminyuziyamu emikhulu noma ubuciko bomgwaqo obumangazayo e-Ehrenfeld. Le ndawo yingxenye yesinqe nemfashini yeCologne, ukubeka indawo yekhofi nokuvuna.
Njengoba ukwazi ukubona iCologne iyidolobha elimangalisayo elinobhajethi ongaya kulo eYurophu. Ngaphezu kwakho konke, into ehamba phambili ngayo ukuthuthwa kwayo okusebenzayo futhi okungabizi. Ezokuthutha zaseJalimane, ujantshi wesitimela, futhi tram zikhululekile ngokwedlulele futhi esebenza kahle, ngakho-ke kukugcinela isikhathi esiningi sokujikeleza. Ukuthola ukudlula nsuku zonke noma kwamasonto onke kwesitimela kuyindlela enhle yokwenza wonge imali lapho esohambweni.
Amanani eBerlin aya e-Aachen
IFrankfurt iye eCologne Izintengo Zesitimela
Amanani entengo eDresden aya eCologne
Amanani e-Aachen kuya eCologne
2. esetshenziswa, Belgium
Waffles for ibhulakufesi futhi usukulungele ukuhlola konke 80 amabhuloho nechibi lothando, Amanzi amancane. IBruges iyi- idolobha elihle lasendulo eBelgium futhi ingenye yezindawo ezingabizi kakhulu ukuvakashela eYurophu. Kusuka enanini elivelele lezinqaba kuya ku- ukugibela isikebhe emiseleni, kunezinto eziningi ezingabizi ongazenza eBruges, ukugibela isitimela kusuka eBrussels.
Uma ufisa ukuqhuma kancane, lapho-ke kufanele usebenzise isikhathi nengxenye yesabelomali sakho sansuku zonke kushokoledi. Bheka uphawu ‘olwenziwe ngezandla’ 50 we izitolo zikashokoledi edolobheni ukuze uthole ushokoledi omuhle kakhulu waseBelgium.
Usayizi omncane wamaBruges nokuhlelwa kwedolobha kulula kakhulu ukuwahlola ngezinyawo, ngakho-ke akufanele uchithe isikhathi kwezokuthutha. Empeleni, indlela enhle yokuhlola idolobha futhi ufunde ngamasiko namagugu alo ukujoyina uhambo lokuhamba mahhala. Ngale ndlela ungathola wonke amathiphu wangaphakathi kuzindawo zokudlela ezingabizi, ukuyothenga okuyisikhumbuzo, futhi indlela engcono kakhulu yokuvakashela okuhehayo okuyinhloko.
3. Izindawo ezingabizi kakhulu eYurophu: I-Czech Krumlov, I-Czech Republic
ICzech Republic ingenye yezindawo ezingabizi kakhulu ukuhambela eYurophu, ngakho-ke idolobha elihle laseCesky Krumlov lisohlwini lwethu. Leli dolobha elimibalabala lijabulisa izivakashi futhi ngaphezu kwakho konke, isabelomali-friendly. Uzokuthola kulula kakhulu ukuzihlola nokuzitika ngokudla kwaseCzech, okusalungiswa ubhiya, nokubuka indawo ngenkathi ungasebenzisi lutho olusuka kubhajethi yakho yezokuvakasha.
Okokuqala nje, ukudlela ngaphandle kushibhile kakhulu, futhi ungathola amamenyu amahle wesidlo sasemini anikeza ukuqala, inkambo main, nobhiya ngamanani ahlekisayo. Ubhiya lushibhile kunamanzi kuyo yonke iCzech Republic futhi luyaluhlanganisa namasoseji adumile afakwe emanzini anosawoti, uzitholele isidlo sakusihlwa esimnandi.
Idolobha libuye libe nezinqaba nezingadi ezimangalisayo ezikhululekile ukuvakashelwa, futhi uma ufisa ukukhuphukela ekubukeni okuhle, khona-ke imali yokungena embhoshongweni ingaphansi kuka 5 euro. Enye inketho enhle yokuhlola idolobha ngokujoyina uhambo lokuhamba mahhala nokuhlangana nabanye abahambi noma ukubhuka a ICesky Krumlov yangasese yedolobha lokuhamba okweqembu lezigelekeqe. Ngale ndlela ungathola izimfihlo zedolobha, izinganekwane, namathiphu okuba nohambo olumangazayo lokuya ezweni lezinganekwane.
IHungary ingelinye lamazwe ashibhe kakhulu eYurophu, futhi kunokuningi ongakubona kuneBudapest. I-Eger idolobha elihle, ngemithombo eshisayo, UBukk Hungary’s esiqiwini, nezimpawu ezinhle zomhlaba ongazivakashela. Zonke lezi zimangaliso ziyatholakala ngaphandle kokuyekethisa isabelomali sakho sohambo.
I-Eger ingelinye lamadolobha adumile aseHungary futhi iyikhaya lewayini elibomvu elimnandi, etholakala phakathi kwezintaba zeBukk. Ukubukwa kwendawo ukubukwa kwemvelo kwenza isethingi ephelele ye- iwayini yokunambitha ngemuva kosuku olukhulu lokuhamba izintaba epaki elihle laseBukk nokuziphumuza emithonjeni yemvelo. Njengoba iHungary iyikhaya leziphethu zemvelo ezinhle kakhulu eYurophu, cwilisa ku-thermals kufanele nakanjani.
U-Eger ulungele impelasonto yokuphumula e-Budapest. Ukukhetha phakathi kohambo losuku noma ikhefu lomuzi elivela eBudapest elakho lonke, kepha sincoma ukuchitha okungenani impelasonto ende kuleli dolobha elijabulisayo.
5. Izindawo ezingabizi kakhulu eYurophu: Cinque Terre, Italy
Izindlu ezinemibala egqamile, ngihlezi eceleni kweSentiero Azzurro enhle, yenza iCinque Terre isimangaliso sokwakha sase-Italy. ICinque Terre ingenye yezindawo ezingabizi kakhulu ukuhamba eYurophu nase-Italy. Akukho okuqhathaniswa nomuzwa wokuhamba ngokunethezeka nangokushesha phakathi 5 izindawo ezimangalisayo. Le ndlela yokuhamba ikongela isikhathi esiningi nemali ngekhadi lesitimela laseCinque Terre.
Ngokuqondene nendawo yokuhlala, ukwenza iLa Spezia isisekelo sakho sohambo kuyindlela enhle. Yidolobha elihle lasechwebeni lase-Italy elinamahostela amaningi namahhotela ongakhetha kuwo.
Cinque Terre iba matasa impela futhi ibize kakhulu ngenkathi ephezulu. Ngakho-ke, kungcono ukuvakashela phakathi kuka-Ephreli-Juni ehlobo noma ngo-Okthoba-Novemba ukubabaza ubuhle bayo bemvelo ekwindla.
Intengo yesitimela yaseLa Spezia iye eRiomaggiore
UFlorence waya eRiomaggiore Amanani Wokuqeqesha
Modena kuya eRiomaggiore Izintengo Zezitimela
ILivorno kuya eRiomaggiore Izintengo Zokuqeqesha
Ikhaya eMozart, Ubuciko baroque, Schönbrunn Palace, kanye ne-maze eluhlaza, IVienna iphezulu. Ngenkathi abanye bengathi kuyabiza, Uhambo oluya enhlokodolobha yase-Austrian luyenzeka ngokuphelele futhi ngeke luwele kude nesabelomali sokuhamba sansuku zonke kweminye iminhloko yaseYurophu efana nePrague noma iBudapest. Idolobha lihambisana nezivakashi, ngakho-ke ungancoma isiko elinothile, cuisine, nobuhle bempilo yaseViennese, ngaphandle kokuyekethisa okonga impilo yakho.
Inhlokodolobha yase-Austrian ingenye yezindawo ezingabizi kakhulu ukuvakashela eYurophu, sibonga amadili alo ahambisana nezivakashi. Ngokwesibonelo, iKhadi leVienna lizokutholela izaphulelo ezinhle kumaMyuziyamu, ezikhangayo, futhi ezokuthutha zomphakathi. Ngaphezu kwalokho, unganambitha i-strudel enhle kakhulu yaseViennese kwezinye izindawo zokudlela ezimangalisayo zaseVienna, ngesikhathi sokudla kwasemini. Izindawo zokudlela eziningi nezindawo zokudlela ezinhle zinikeza i- 2-3 imenyu yokusetha inkambo ngaphansi kwe- € 10.
Ngobusuku ngaphandle kwesiko nomculo, amathilomu amaningi anezingoma zomculo ezibukhoma zamahhala. kodwa, uma amehlo akho ebheke ubusuku e-opera edumile, lapho-ke kufanele ube namehlo akho ekutholeni amathikithi wokusebenza okumile, njengoba eshibhile kakhulu kunamathikithi we-opera wakudala.
7. Izindawo ezingabizi kakhulu eYurophu: Normandy, France
Amabhishi egolide, izinganekwane zikaJoan wase-Arc waseRuen, isiqhingi saseMont St. Isigodlo saseMichel, ambalwa nje amagugu aseNormandy. Lesi sifunda esithandekayo uhambo lwamahora amabili ukusuka eParis, kodwa ngokungafani nenhlokodolobha yaseFrance, ingenye yezindawo ezingabizi kakhulu ukuhamba eFrance.
INormandy yaziwa kakhulu ngamabhishi afikayo avela eWWII. Nokho, kuyikhaya lamawa e-Etretat, emaweni amakhulu e-limestone, isimangaliso semvelo esimangalisayo. Idolobhana le-Scenic Giverny lapho uClaude Monet ayehlala khona wapenda khona iminduze edumile kungenye indawo ongaphuthelwa kuyo uhambo oluya eNormandy.
ukuze uphethe, ukuhamba eYurophu kungaba yinto engabizi kakhulu. Normandy, Cinque Terre, Vienna, Eger, esetshenziswa, Cologne, noCesky Krumlov, kukhona 7 izindawo ezingabizi ukuhamba eYurophu. Amathiphu ethu azokugcina ungasebenzisi imali yakho yokonga ngeholide elilodwa futhi uqinisekise ukuthi unohambo olukhumbulekayo nolukhethekile.
Lapha e Londoloza Isitimela, we will be happy to help you plan your vacation to the most affordable places in Europe by train.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Ezingabizi Kakhulu Zokuhamba EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-affordable-places-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila yethu ethandwa kakhulu yezitimela - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha izilimi / ja ku / fr noma / de nokuningi.
affordabletravel ezezimali umabhebhana czechrepublic TrainTravelBelgium TrainTravelHungary travelfrance travelgermany